कसरी पाउने महिला उद्यमशीलता कर्जा ? - Arthapage
कसरी पाउने महिला उद्यमशीलता कर्जा ?
बैंकबाट व्याज अनुदानमा १५ लाख रुपैयाँसम्म महिला उद्यमशीलता कर्जा पाइन्छ । बढीमा पाँच वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी यस्तो कर्जा पाइन्छ । यस्तो कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्वन्धित बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूले तोक्न सक्नेछन् । कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
कसले पाउँछ ?
१८ वर्ष उमेर पूरा भएको महिलाले यस्तो कर्जा पाउन्छन् । समूह भए फरक परिवारका कम्तीमा पाँच जना १८ वर्ष उमेर पूरा भएका महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो कर्जा लिँदा उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव चाहिन्छ । समूहको हकमा सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात चाहिन्छ । त्यस्तै, प्यान नम्बर पनि लिएको हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले यस्तो कर्जा लिन पाउँदैन ।
व्याजदर कति ?
नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कर्जाको ब्याज भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क पनि बैंकले लिन पाउँदैन । बैंकले यसरी लिएको व्याजको पाँच प्रतिशत सरकारले व्यहोर्छ ।
प्रकाशित मितिः 10:18:17 AM |
Prevसिद्धार्थ बैंकको नयाँ मुसिकोट शाखा संचालनमा
Nextवीमाको पहुँच बढाउन पालिकासंग सहकार्य,प्रक्रिया सरल बनाउन जनप्रतिनिधिको सुझाव